Usuku 8 ubekelwe bucala ukuze train ende kwaye idolophu bala Rothenburg ob der Tauber. Akuyomfuneko ukuba worry ukuba uhambe inde, uya kuba nexesha kutyelela le dolophu nentle. Mncane kakhulu, kwaye ungabona kwi kwemini enye.
Nuremberg lo mzi yesibini inkulu kwiphondo yaseBavaria. Kwakhona kufuneka utyelele indawo kwi yakho 10 iintsuku yohambo eBavaria. kunjalo, ukuba uyafuna, ungasoloko ungayicima ku baseWürzburg. Zombini imizi iyelelene omnye komnye kunye Rothenburg, ngoko ke isigaba zehambo ziya kuba lula.
Ufuna ukuba zilungise ngendlela yethu hetalia us “A 10 Day uhambo In eBavaria Germany” kwi sayithi yakho? Ungakhetha noba inanilethu iifoto kwaye okubhaliweyo kwaye asiphe credit kunye unxulumaniso kwesi hetalia us. Okanye nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fitinerary-bavaria-germany%2F ‎- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)